Arsene Wenger Oo Qirtey Inuusan Jecleyn Daawashada Van Persie Oo U Dhalinaya Goolal Man United - jornalizem
Arsene Wenger Oo Qirtey Inuusan Jecleyn Daawashada Van Persie Oo U Dhalinaya Goolal Man United
Weeraryahanka £22million ay ku iibsatay kooxda Man United ayaa waxaa u dhaliyey gool kooxdaasi isagoo u saftay labo kulan oo qura.
Wenger ayaa qirtey in Van Persie goolkii uu ka dhaliyey Fulham toddobaadkii hore uu ku abuuray niyad xumaan.
“Waxa uu ahaa gool cajiib ah oo ka mid ah noocyada goolasha uu dhaliyo Van Persie. Balse waxa aniga aan aadka ula yaabay waxa uu ahaa waxa uu xirnaa maaliyad kale!
“Muxuu ugu dabaaldagayaa maaliyadaas oo kale?Ma garanayo.
“Waan ogahay laakiin ma jecli.”ayuu ku jawaabay isagoo is weydiiyey su’aal.
Wenger ayaa ku qarash gareeyey £24 million Olivier Giroud iyo Lukas Podolski si ay u buuxiyaan booskii uu baneeyey Van Persie kaasoo u dhaliyey 30 gool xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kooxka North London.
Hase yeeshee tababaraha Faransiiska ayaan kooxdiisa kulamadii ay ciyaartay kooxaha Sunderland iyo Stoke aysan wax goolal ah ka dhalin.
Haddii aysan Gunners qeybtii hore ee kulanka maanta ee Liverpool la ciyaareyso aysan wax gool ah dhalin ayaa waxa ay noqon doontaa rikoor cusub oo aan la jecleyn oo ah inaysan wax gool ah ka dhalin tartanka Premier League.
Waxayna halis ugu jiraan inay ka sara maraan jiilaalkii goolasha ka hayay bilowgii xilli ciyaareedkii hore kaasoo kulankii saddexaad ee ay Arsenal ciyaartay qeybtii hore uu Theo Walcott uu u dhaliyey gool, balse kulankaa ayaa ahaa kii 8-2 ay Manchester United ku dardartay Arsenal.
Hase ahaatee Wenger ayaa weli ku adkeysanaya in uu ku kalsoon yahay weeraryahanadiisii cusub.
Hase yeeshee waxa uu qirey inaysan weli kooxdiisa aysan isla qabsan uuna jecel yahay in dhowaan ay la qabsan doonaan ciyaaryahanada cusub ee uu kooxda ku soo daray horyaalka Ingiriiska.